Latest service updates July 15, 2021 ~ The ICT.com.mm Blog
Latest service updates July 15, 2021
၁၂၊ ၇၊၂၀၂၁ မှစ၍ ICT.com.mm in-store pickup (ဆိုင်သို့ ကိုယ်တိုင်လာယူစနစ်) ခေတ္တယာယီရပ်ဆိုင်းထားသည်ကို ၂၅ ရက်နေ့အထိ တိုးမြင့်လိုက်ပါသည်။
ထို့အပြင် ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်နေ့မှ ၂၅ ရက်နေ့အထိ ရုံးလုပ်ငန်းများကို ရပ်ဆိုင်းထားမည်ဖြစ်ပြီး၊ delivery ပို့ဆောင်ပေးခြင်းများကိုလည်း ၎င်းနေ့ရက်များအတွင်း ဆိုင်းငံ့ထားမည် ဖြစ်သည်။
Online Store ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့် online shopping ကို ပုံမှန်အတိုင်း လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ Gaming Gift Codes, iTunes/Play Store, Netflix Gift codes အစရှိသည်တို့ကို MPU, Credit Cards, m/iBanking များဖြင့် ပေးချေပါက ပုံမှန်အတိုင်း email မှတဆင့် ပို့ဆောင်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ Physical product များကိုမူ online မှ အော်ဒါတင်ထားနိုင်ပြီး၊ ပို့ဆောင်ပေးခြင်းကို အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ၂၅ ရက်နေ့အထိ ဆိုင်းငံ့ထားမည် ဖြစ်သည်။
အခြားမေးမြန်းလိုသည်များရှိပါက Facebook Messenger သို့မဟုတ် ICT.com.mm chatbox မှတဆင့် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်လိုပါက 0976 544 1707 – 10 သို့ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
We would like to announce the further extension of the temporary suspension of in-store pick-up service that is now due to expire from July 12, 2021, to July 25, 2021.
In addition, our office will be temporarily closed from July 17 to July 25, 2021, therefore, there will be no delivery service during this period.
Since we are an online retailer, Gaming Gift Codes, iTunes/Play Store, Netflix Gift codes can be purchased with your MPU, Credit Cards, and internet/ mobile banking payment methods. Once the payment is successful within 15 mins you will receive the confirmation email with the digital codes of your order.
You still can place your order for all other goods however, keep in mind that the physical product orders which are required delivery service, will ONLY be resumed on July 26, 2021, Monday.
For detailed information, please reach out to us via Facebook Messenger or our ICT.com.mm chatbox. Our customer support team will be here at 0976 544 1707 – 10 to assist you with any questions.
Newer Latest service updates July 25, 2021
Older Latest service updates July 13, 2021